५०,००० को सकसः दशैँ मान्ने कि घर बनाउने ? - Sagarmatha Online News Portal
५०,००० को सकसः दशैँ मान्ने कि घर बनाउने ?
 भुकम्पले घर पूर्ण क्षति भएर पहिलो किस्ता ५० हजार अनुदान लिएका सिद्धिचरण नपाका एक युवाले अनुदान लिएकै भोलिपल्ट श्रीमतीलाई १० हजार दिएर बाँकी ४० हजार लिएर घुम्न जाने भनेर हिंडे । श्रीमतिले प्रहरीलाई खबर गरेपछि प्रहरीले मानेभञ्ज्याङबाट फर्कायो ।
 च्यानम गाविसका अर्का भुकम्प पीडितले ५० हजार अनुदान लिएकै रात मादक पर्दाथ र तासमा सकेपछि खाना खान बसेकै घरबाट १० हजार सापटी लिएर घर गए ।
 अनुदान वितरण शुरु भएपछि सदरमुकाम ओखलढुंगाका सुनचाँदी पसलमा भीड देखियो । धेरैले अरु १० हजार थपेर एक तोला सुन जोडे ।
०७२ सालको भुकम्पले घरबार विहीन भएका परिवारका अभिभावकले गैर जिम्मेवार भुमिका खेलेर अनुदान खर्च गरेका यी त प्रतिनिधी घटना मात्रै हुन् । यस्ता काममा अनुदानको रकम खर्च गर्ने थुप्रै लाभग्राही छन्, जसले भत्किएको घर बनाएर परिवार राख्छन् भन्ने विश्वाश गर्न सकिने आधार छैन ।
पीडित भएर पनि आम्दानीका स्रोत हुनेलाई ५० हजार अनुदानको महत्व कमै होला । तर, दिनभरी श्रम गरेर छान टार्ने हाम्रो समाजमा ठूलै जमात छ, जसमा हामी आफै पर्छौं । यस्तो आर्थिक अवस्थका हामीले चाडबाडको मुखमा पाएको अनुदान के गर्न सक्छौं ? प्रश्न खडा हुन्छ । कतिले गैर जिम्मेवार भएर दुरुपयोग गरे, त्यो फरक पाटो हो । यद्यपी इमान्दार भएर घर बनाउने योजनासहित अनुदान बुझेका हजारौं भुकम्प पीडितका अगाडी ५० हजारभन्दा ठूलो दैनिकी चलाउने पहाड उभिएको छ । मुखैमा दशैं आएको छ । यो चाड ८५ प्रतिशतले कुनै न कुनै अवस्थाबाट मान्ने गर्दछन् ।
छिमेकमा खसी काट्ने, राम्रा लुगा लगाएको देख्ने बाल मनोविज्ञानले आफ्नो अभिभावकले पनि देलान् भन्ने आशा नहुने भन्ने हुदै होइन । यस्तो अवस्थामा अनुदान रकम आम गरिब परिवारले जोगाएर घरको जग हाल्न सक्छ ? यो विल्कुल सम्भव छैन । यो अनुदान त ५० प्रतिशतका लागि दशै खर्च र सामान्य तिरोभरो मै सिमित हुनेमा दुइ मत छैन । घर भत्किएर टहरोमा बस्नु परेका समयमा चाड पर्व मनाउनु पर्ने सांस्कृतिक दायित्व आवश्यकतासँग जोडिएको छ । यस्तो संकटपूर्ण अवस्थामा दैनिक चलाउन अनुदान खर्च गर्नु पर्ने बाध्यता भएपछि दशैंको मुखमा वितरण गरिएको अनुदान दशैं खर्चमै सिमित नरहला भन्न सकिन्न । यो पंक्तिकार पनि यस्तै समस्यामा रुमलिएकै छ ।
गाँस पहिलो आवश्यकता हो बास भन्दा पहिले । त्यसैले घर बनाउनै पर्ने बाध्यतामा रहेका विपन्न भूकम्प पीडितहरु चाहेर पनि अनुदान सदुपयोग गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । उता आफ्नो घर आफै निर्माण गर्न सक्षम भुकम्प पीडित र विपन्न भएर पनि अपवादका फुर्मासी गर्नेहरुले पनि अनुदान माथिका उदाहरण अनुसारकै (सदुपयोग ?) गर्छन् ।
यसले सरकारले आम नागरिकलाई सुरक्षित आवाशमा राख्न दाताको सहयोगमा अनुदान र ऋण दिने अभियान सफल हुनेमा थुप्रै आशंका छन् । पहिलो किस्ता लिएकामध्ये घरको जग हालेर दोस्रो किस्ता लिन पहिलो किस्ता लिएकामध्ये ४० प्रतिशत मात्र आउन सक्ने अवस्था देखिएका अनुदान वितरणमा संलग्न अधिकारीहरु नै बताउँछन् ।
कतिपय लडेका र भत्केका घर क्षतिको विवरणमा परेका छैनन्, तर नेता र कर्मचारीको पहुँचमा रहेका र सदरमुकाम आसपासमा सामान्य क्षतिका घर पनि पूर्ण क्षति भइ अनुदान लिएका छन् । तथ्यांक संकलनमा पनि गरिव र विपन्न पहुँच नभएकै व्यक्ति छुटेका छन्, भने अनुदान पाएका विपन्नले घर बनाइ हाल्ने अवस्था छैन । यस्तो अवस्थामा भुकम्प प्रतिरोधी घरमा आफ्ना नागरिकलाई सुरक्षित राख्ने अभियानले कसरी पूर्णता पाउला ?
बाहिङ जाति हुने आधारहरु के हुन त ?
यसपालिको जनगणनामा कुलुङहरु लागि परौं, आफ्नो जातीय स्वपहिचान र अस्तित्व स्थापित गरौं